Amerikana Manao Fangatahana Ara-Pitsarana Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Amerikana Manao Fangatahana Ara-Pitsarana Ao Shina
Voadika ny 10 Avrily 2018 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Français, bahasa Indonesia, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nivoaka vaovao i Julie Harms, Amerikanina nahazo diplaoma tao Harvard satria iray na vitsy, na angamba vahiny voalohany mpanao fangatahana ara-pitsarana tany Shina izy. Ny tranga nisy azy dia fitarainana amin'ny governemanta satria nogadraina noho ny fiampangana izay nolazainy fa tsy marina ny fofombadiny, Liu Shiliang. Nihaona tamin'i Liu Shiliang izy folo taona lasa izay raha nandeha tany Shina. Natao fombafomba izy ireo tamin'ny taona 2007, saingy nahemotra ny fampakaram-bady noho ny fifanolanana teo amin'ny mpifanolo-bodirindrina tamin'izany taona izany, ary nosamborina i Liu tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity noho ny fiampangana azy tamin'ny fitsofohana tsy nahazo alalana amin'ny tanin'ny hafa.
Nanapa-kevitra i Julie fa hiditra amin'ny rafitra fangatahana ara-pitsarana any Beijing tamin'ity taona 2009 ity satria tsapany fa tsy nahavita nandamina ny fifandirana tamim-pahamarinana ny rafi-pitsarana eo an-toerana. Rafitra ara-panjakana mba handrenesana ireo fitarainana sy alahelo avy amin'ireo olon-tsotra ao Shina ny rafitra fangatahana sy fitsidihana ara-pitsarana (xinfang). Ny fanjakana foibe sy ny birao ao an-toerana misahana ny taratasy sy fitsidihana no tompon'andraikitra amin'ny fandraisana taratasy, fiantsoana ary fitsidihana avy amin'ny olona na vondrona.
Raha mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana, dia tsaran'i Julie tamin'ny fanaovana taratasy fangatahana ny fahasamihafan'ny rafi-pitsarana Shinoa sy Amerikana. Araka ny fanehoan-keviny (avy amin'ny tati-baovao etsy ambony):
Miankina amin'ny zavamisy fahita fa tsy dia manana fahalalana betsaka momba ny lalàna ny mponina ao an-toerana. Hitako fa henatra izany.
.Miresaka ny elanelana eo amin'ny lalàna sy ara-kolontsaina misy eo amin'i Shina sy i Etazonia ny fanehoan-kevitra ao amin'ny sina forum:
Manao fangatahana ara-pitsarana any Shina ny Tandrefana satria misaina araka izay ao anatin'ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny fireneny ry zareo. Tsy takatr'izy ireo fa any Shina izy ireo. Raha efa zatra izany isika Shinoa, dia mbola mila mizatra ny fomba Shinoa ny Tandrefana. Mampalahelo izany, saingy zava-misy!
Toa mbola tsy zatra an'i Shina ny tandrefana; mangataka tany tan-dalàna sy zon'olombelona izy ireo- zavatra izay tsy misy ao Shina!
Fisehosehoana fotsiny ny rafitra fangatahana ara-pitsarana. Ho an'ny olona izay mbola mihevitra fa ilaina izany, dia manoro hevitra azy ireo aho mba hampahafantatra ny raharaha ara-pitsaran-dry zareo amin'ny media hampisy fiantraikany..
Ahitana fanehoan-kevitra amin'ny lafiny ratsy kosa ny forum NetEase
Tsy te hanambany ny fireneko aho, saingy tsy vitako ny tsy hilaza hoe: mialà ao amin'ity firenena ity ianao sy ny vadinao. Tsy toerana ahafahan'ireo Amerikanina hiavotan-tena i Shina. Tsy azo antoka ihany koa raha ho lasa toerana misy ny soatoavina hajaina manerantany mety amin'ny fiainan'ny olona i Shina. Farafaharatsiny, tsy mila manana tany tan-dalàna i Shina ankehitriny. Izany mihitsy aza no mbola tsy azon'ilay nahazo diplaoma tao Harvard.
Misy zavatra hafahafa marobe ao amin'io fanjakana mistery io. Manantena aho fa hahavita izay antenainy izy. Manaova sarimihetsika mikasika ilay raharaha – eto amin'ity firenena ity, mety hisy olana ho voavaha rehefa mahasarika ny saina ianao.
Ao amin'ny fanehoan-keviny, i Xu Jingsheng (徐经胜) milaza izay tsy azon'i Julie Harms:
Amin'ny tsy fahazoana ny antsipirian'ny raharaha, ny volana maro nanaovana fangatahana no tokony hahatakarany fa tsy mitovy amin'ny any Etazonia ny kolontsaina sy ny rafi-pitsarana aty Shina. Andro vitsy talohan'ny nandehanany any amin'ny birao fangatahana ara-pitsarana, nilaza taminy ny manamboninahitra iray hoe “Efa mikarakara matotra ny raharahanao ny filaminam-bahoaka. Nanome torolàlana momba ireo olana nolazainao ny minisitra.” Mety mbola tsy azony ny hevitr'ity fehezanteny ity.
Na dia maro aza ireo mpanao fangatahana manana ny rariny amin'ny fangatahan'izy ireo, tsy voavaha araka ny lalàna ny olan'izy ireo. Matetika mety ho voavaha amin'ny ambaratonga ambany kokoa ireo olana. Na izany aza, tsy raharahiana sy ataon'ny mpiasa tsirambina ny fepetran-dalàna, raha tsy mijery izany ireo manampahefana ambony. Mahita trangan-javatra isika fa matetika rehefa manoma lanja azy ihany ny eo amin'ny fitondrana vao miasa ny rafi-pitsarana [ao Shina].
Ny tanjon'ireo mpanao fangatahana maro dia ny hisarika ny sain'ny mpitondra. Rehefa mandinika ny olana sy manome toro-lalana ny manampahefana vao voavaha ny olana. Raha tsy izany, tsy misy fanantenana ny famahana ny olana, na dia manao fangatahana mandritra ny volana maro sy taona maro aza ianao. Mety hoe tsy mahatakatra an'izany i Julie Harms, ary amin'ny ankapobeny, izany tsy fahatakarana izany dia fandinihana fa mila hahitsy ny rafi-pitsarana eto amintsika.